Kulankii faanka oo fadeexo isku badelay | KEYDMEDIA ONLINE
Kulankii faanka oo fadeexo isku badelay
MUQDISHO, Soomaaliya – Si ay koox malaamiley ah ugu sacab tumaan, wax qabad aan jirinna loogu nisbeeyo, Guddoomiyaha gobolka Banaadir, ahna duqa Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Finish), ayaa xalay caasimadda ku dhigtay kulan lagu maamuusayay sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay markii loo magacaabay hoggaanka Caasimadda.
Hayeeshee, kulanka ayaa isku badelay munaasabad fadeexadeed kadib, markii Agaasimaha Arrimaha Bulshada ee xafiiska Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, ahna Guddoomiyaha barnaamijka Is-xilqaan, Maryan Aadan Amiin, ay sheegtay in Cumar Finsh uu qeyb ka yahay madax ka tirsan Dowladda federaalka, oo iyada ku naas-nuujiyay guri dad-weyne, si ay ugu noolaato.
Waxa ay xustay in Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday Farmaajo, Ra’iisul Wasaarihii hore Kheyre, Wasiirkii Howlaha Guud, Heesow iyo Guddoomiya Gobolka Banaadir, Cumar Finish, ay iska kaashaden in in lagu wareejo, guri dowladeed, si ay ilmaha ugu korsato.
“Guddoomiyaha guri dowladeed ayuu siiyey” ayay tiri Maryan, oo hadal kooban ka jeedisay xaafladda, waxay ku sii dartay, “Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, shir inagoo ku jirna, Xasan Cali Khayre, waxa uu yiri Madaxweyne Maryan 700 ayey qaadataa Isxilqaana waa dhistaa, guri ijaar ah oo 500 ahna way ku jirtaa, hadday meel fog tagtana nafteydaa qatara.”
Kadib, Farmaajo, wuxuu Cabdi Aadan Hoosoow, Wasiirkii Howlaha Guud, weydiiyay in ay wax ka noolyihiin guryihii Dowladda, kaas oo ku jawaabay in uu labo guri midkood ku wareejin doono Maryamo, kadib, uu wareejinta gurigaas sii fududeeyay Cumar Finish.
Arrinkaan ayaa ku soo aadaya, xilli maalmihii la soo dhaafay uu socday is-qabqabsi la xariira heshiisyo hore loo galay iyo bixinta dhul dowlo, oo hareeyay xaafiisyada sar sare ee dowladda.